My World: သိသလို မသိသလို ... ခရစ်စမတ် ရိုးရာအစဉ်အလာလေးတွေ
Posted by PhyoPhyo at Monday, December 23, 2013 Labels: သိသလို မသိသလို ... ခရစ်စမတ် ရိုးရာအစဉ်အလာတွေ, အထွေထွေမှတ်စု
ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေက လူတိုင်းအတွက် မရိုးနိုင်အောင် အမြဲလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေသလိုပါပဲ။
အချိန်တွေပြောင်း၊ ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေလည်း မပျက်မကွက် ပြောင်းကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လည်း ပြောင်းလဲဦးတော့မယ်။
နှစ်တနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံး ဒီဇင်ဘာလမှာ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ဘာသာရေးအထွတ်အမြတ်ပွဲတော်အဖြစ် ကိုယ်နေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်ရိုးရာအစဉ်အလာအရ လေးလေးနက်နက် ကျင်းပကြသလို၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ပျော်စရာရွှင်စရာပွဲတော်လေးအဖြစ်လူမျိုးစုံ ပါဝင်ဆင်နွဲတတ်ကြပါတယ်။
ဂျီးဆပ်မွေးဖွားခြင်း .. ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်း .. သူတော်စင်စိန့်နီကိုလာစ့်
နှုတ်သီးနီနဲ့သမင်ဒရယ်လေးရဲ့ စွတ်ဖားထဲက လက်ဆောင်တွေနဲ့စန်တာကလောစ့် ...
ခရစ်စမတ် အိုင်ဗီပန်း ...
သူတို့တွေရဲ့ခရစ်စမတ်ဒဏ္ဍာရီ ၁၃ချက် စပ်စုကြည့်ရအောင်နော် ...
၁. ခရစ်စမတ်သစ်ပင် အလှဆင်တာ
အလယ်ခေတ်(ခရစ်နှစ်၅၀၀ ကနေ ၁၄၀၀အထိ)မှာ အာဒံနဲ့ ဧ၀တို့ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီထဲကပန်းသီး သစ်ပင်တို့ကို ရည်ညွှန်းပြီး ခရစ်စမတ်သစ်ပင်လေးကို စတင်ပုံဖော်လာကြတယ်၊ အာဒံရဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ထဲက သစ်ပင်တွေအတိုင်းပဲ ဒဏ္ဍာရီကို အမှတ်တရအသက်သွင်းကြတဲ့အခါ ပန်းသီးလေးတွေ ကွတ်ကီးမုန့်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ခဲ့ကြတယ်။
၂. ရူးဒေါ့သမင်ဒရယ်လေးကလည်း ခရစ်စမတ်နဲ့အတူ
ဒရယ်တွေကို နှင်စီးစွတ်ဖားလှည်းတွေဆွဲရန်၊ ဒရယ်နို့အသုံးပြုရန် မွေးမြူလေ့ရှိတယ်၊ အလာစ့်ကာပြည်နယ်၊ ဝေလမြို့လေးတွေမှာ စာဖြန့်ဝေဖို့အတွက် ဒရယ်စွတ်ဖားလှည်းလေးတွေကိုသုံးကြတယ်၊ ပုံပြင်ထဲက ရူးဒေါ့လို့ခေါ်တဲ့ဒရယ်လေးကတော့ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့နှုတ်သီးနီလေးရှိတယ်၊ စန်တာကလော့စ်ကို အကူအညီပေးသူ ကိုးကောင်မြောက်ဒရယ်လေးပါ၊ ရော့ဘတ်လူးဝစ်မေက ၁၉၃၉ခုနှစ်မှာ ရူးဒေါ့နှုတ်သီးနီဒရယ်ဇာတ်ကောင်လေးကိုဖန်တီးရေးသားခဲ့တယ်၊ ဘဲရုပ်ဆိုးပုံပြင်လေးကိုလည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြေခံတယ်လို့လည်း ဆိုတယ်။
၃. ခရစ်စမတ်မှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကလည်း အရေးပါတာပဲ
ဟော်လန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်၊ ခေါက်ဒါ(Gouda)မြို့တော်မှာ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့အခါ ရောင်စုံဖယောင်းတိုင်တွေချည်းပဲ အများကြီးထွန်းညှိကြတယ်၊ ခေါက်ဒါမြို့တော်ဟာ ဒတ်ခ်ျ့ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်ငန်းရဲ့ အချက်အခြာဒေသဖြစ်တယ်၊ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်တွေမှာဆိုရင် ခေါက်ဒါမြိ့တော်ရင်ပြင်မှာ မြို့တော်ဝန်က ယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းကို ရွတ်ဖတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေအားလုံးပိတ်ထားကြပြီး ဖယောင်းတိုင်းမီးအလင်းတွေနဲ့ပဲ ပွဲတော်ကိုကျင်းပလေ့ ရှိခဲ့ကြရာက ခရစ်စမတ်မှာ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေက ဒီနေ့ထိ အရေးပါလာခဲ့တယ်။
၄. ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ ကလေးတွေအတွက်လက်ဆောင်ယူလာပေးသူက စိန့်နီကိုလာစ့်ပါ
ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်နေ့မှာ နီကိုလာစ့်ဟာ သူရဲ့တပည့်ကျော် လူရှုပ်လူနောက်ဘလက်ခ်ပီတာနဲ့အတူ ကလေးတွေအတွက် လက်ဆောင်တွေတပွေ့တပိုက်ကြီး သယ်ဆောင်ပြီးပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိတယ်၊ လိမ္မာတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို သကြားလုံးတွေနဲ့ လက်ဆောင်တွေပေးတယ်၊ ဆိုးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုတော့ ဘလက်ခ်ပီတာက တွယ်ကပ်ခြောက်လှန့်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
၅. အိုင်ဗီပင်က ရာစုနှစ်အတော်များများကတည်းက ခရစ်စမတ်အလှဆင်တဲ့ အပင်အဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားလှတယ်
ခရစ်တော်မပေါ်မီခေတ်ဦးပိုင်းကာလတွေထဲက အိမ်တွေမှာ အိုင်ဗီပင်တွေနဲ့အလှဆင်ကြတယ်၊ ထာဝရစွမ်းအားနဲ့ဆက်စပ်မှုအဖြစ်ယုံကြည်ကြတယ်၊ အိုင်ဗီပင်ဟာ အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီကာလတွေ အတိုင်း ဘ၀တွေတလျှောက်လုံး အေးချမ်းမှုအတွက် ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုတယ်။
၆. မစ်ဆဲလ်တိုး(Mistletoe) လို့ခေါ်တဲ့ ပင်ကပ်ပန်းပင်နဲ့ ခရစ်စမတ်အလေ့အထ
ခရစ်တော်မပေါ်ခင်ကာလနေဘုရား၊ လဘုရား၊ မီးဘုရား၊နတ်ဘုရားတွေအများကြီး ကိုးကွယ်ကြတဲ့အချိန် ဘုန်းကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့မှော်စွမ်းအားတိုးပွားအောင်ကုစားဖို့ မစ်ဆဲလ်တိုးပန်းပင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်၊ ခရစ်စမတ်ကာလမှာ မစ်ဆဲလ်တိုးပင်အောက် နမ်းကြတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံရှိခဲ့ကြတယ်၊ ၁၉ရာစုခေတ်အင်္ဂလန်မှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် လူတန်းစားတွေအကြားထင်ရှားတဲ့ ဓလေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပိုင်း လူလတ်တန်းစားတွေကလည်း အဲဒီဓလေ့ကိုလက်ခံလာကြတယ်၊ အခုအခါ တခြားတိုင်းပြည်တွေမှာပါ ပြန်နှံ့ခေတ်စားတဲ့ ခရစ်စမတ်ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
၇. စက္ကူလှလှထုတ်ပိုးကြတဲ့ လက်ဆောင်တွေ
အေဒီ၁၀၅ခုနှစ်ဝန်းကျင် တရုတ်နိုင်ငံကနေ စက္ကူစတင်ထီတွင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို ထုတ်ပိုးခဲ့ကြတယ်၊ ၁၉၁၇ခရစ်စမတ်နောက်ပိုင်းမှာ အမေရိကတိုက် နီဘရာစကားပြည်နယ် ဟောလ်ဘရားသား စတိုးဆိုင်ကနေပြီး လက်ဆောင်ထုတ်ပိုးနိုင်တဲ့ တစ်သျှူးစလေးတွေစတင်ရောင်းချခဲ့တယ်။ အလှဆင် ပြင်သစ်စာအိတ်စက္ကူသားလေးတွေလည်း အစားထိုးရောင်းချခဲ့သေးတယ်။
၈. အခုဆိုရင်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ထုတ်ပိုးမှုဟာ တော်တော်ခေတ်စားနေပြီ
၁၉ရာစုမှာ ထုတ်ပိုးမထားတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ခရစ်စမတ်သစ်ပင်အောင်မှာထားကြတယ်၊ သစ်ကိုင်းလေးတွေမှာ ချိတ်ဆွဲကြတယ်၊ ဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးတွေဖြစ်မလည်း သိချင်စိတ်နဲ့ လိုက်ရှာကြတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုခံစားစေချင်ကြတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ လက်ဆောင်လေးတွေကို ဖွက်ထားတတ်ကြတယ်။
၉. ဘာဘူရ်ှကား(ရုရှားအခေါ် အဖွား)
လက်ဆောင်သယ်ဆောင်ပေးဝေသူအဖွားအိုဟာ ယေရှုခရစ်တော်လေးဖွားမြင်မှာကို နမိတ်ပေးခဲ့တဲ့ ပုရောဖက်သုံးဦးနဲ့အတူ ခရစ်တော်ရှိရာကို မသွားပဲ တစ်ကိုယ်တည်း ကလေးငယ်ဂျီးဆပ်လေးကို လိုက်ရှာခဲ့တယ်၊ နောက်တော့မှ ပုရောဖက်တွေနဲ့အတူသွားသင့်တာကို သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့တယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်ထဲက ဘာဘူရ်ှကားအဖွားအိုဟာ ကလေးတွေကို ရှာဖွေနေဆဲပဲလို့ဆိုတယ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၅ ရက်နေ့မှာ အိပ်မောကျနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေဆီကို သွားလည်လေ့ရှိပြီး ကလေးတွေအတွက် လက်ဆောင်ချန်ထားရစ်တယ်၊ ဘာဘူရ်ှကားအဖွားအိုအရုပ်လေးကို ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ရောင်းချလေ့ရှိတယ်၊ အရုပ်လေးရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းလေးကို ဖွင့်လိုက်ရင်အထဲမှာ နောက်ထပ်ဘာဘူရ်ှကားလေးတစ်ရုပ်ရှိနေပြီး အရုပ်လေးတွေဦးခေါင်းအဖုံးလေးကို ဖွင့်လိုက်တိုင်း အထဲမှာအရုပ်လေးတွေ အဆင့်ဆင့်ရှိနေကြတယ်။
၁၀. အီတလီနိုင်ငံကဒေသတွေမှာ ခရစ်စမတ်နဲ့ ငါးဟင်းလျာခုနှစ်မျိုးက ရိုးရာဓလေ့တဲ့
ခရစ်စမတ်ငါးဟင်းလျာ ခုနှစ်မျိုးဟာ ဘာသာရေးအခမ်းအနား ၇မျိုးကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုတယ်လို့ဆိုတယ်၊ ငါးကို ဂျုံ၊ မုန့်ညက်၊ ဆလတ်၊ အသီးအနှံ၊ ပေါင်မုန့်၊ အီတလီဝိုင်တို့နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးကြတယ်၊ မုန့်အချိုပွဲတွေမှာ ဆလတ်၊ ဂျုံသစ်သီးကိတ်၊ အမွှေးအကြိုင်မွှန်းထားတဲ့ကွတ်ကီးတွေ၊ နူးဂတ်(အစေ့အဆံမြှုပ်ထားတဲ့သကြားလုံး)၊ အခွံမာသီးလေးတွေပါဝင်ပါတယ်။
၁၁. စုန်းမကြီးရဲ့ ကိတ်မုန့်အိမ်လေး(Gingerbread house)
နူးညံ့လှတဲ့အိမ်ပုံကိတ်မုန့်လေးတွေကို စုန်းမအိမ်လို့ ဂျာမန်တွေကခေါ်ကြတယ်၊ ဂျာမန်စာရေးဆရာ ဂရင်းမ်ရဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ “ဟန်ဆဲလ်နဲ့ ဂရဲ့တဲလ်” ပုံပြင်ထဲက ကိတ်မုန့်အိမ်လေးတွေကို ခရစ်စမတ်မှာပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။
၁၂. ပူတင်းထဲက ကံကောင်းခြင်းတွေ
ပူတင်းမဖုတ်ခင်အရောအနှောထဲမှာ လက်စွပ်၊ ကြယ်သီး၊ အပ်ချုပ်လက်စွပ်နဲ့ ရွှေပြားပိုက်ဆံအကြွေစေ့လေးတွေမြှပ်ထားပြီး ပူတင်းဖုတ်ကြတယ်၊ ကံကောင်းသူ/ ကံမကောင်းသူ တစ်ဦးဦးက အဲဒီပစ္စည်းလေးတွေတစ်ခုခုကို ရခဲ့ရင် ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ ညွှန်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်အတိုင်း လက်ထပ်ခြင်း၊ အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတွေ အဲဒီနှစ်အတောအတွင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။
၁၃. ရူးရဲသစ်လုံးပုံမုန့်အချိုပွဲ (Yule Log)ဟာ တိုင်းပြည်အတော်များများ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ မုန့်အချိုပွဲဖြစ်နေပါပြီ
အစပြုခဲ့တာက ခရစ်စမတ်မှာမီးပုံပွဲလုပ်ရင်း သစ်လုံးကိုမီးလောင်ကျွမ်းစေကြတယ်၊ သစ်လုံးကရလာတဲ့ ပြာမှုန့်တွေဟာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်၊ ဒီရိုးရာဓလေ့ကို ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ၁၁၈၄ ခုနှစ်က စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။
phyophyo said :
source : http://www.rd.com/your-america-inspiring-people-and-stories/13-things-you-didnt-know-about-christmas-traditions/article187296.html
Living Fashion Magazine, December, 2012
ခရစ်စမတ်မှာ ကြက်ဆင်သားစားကြသေးတယ် မဟုတ်လား
အဲဒါက ဘယ်ဓလေ့ပါလိမ့်..ြ့ကားဖူးတာ မေးကြည့်တာပါ
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှတော့ ရေရေရာရာ မသိပါဘူး
ဖြိုးက ခုလို ရှင်းပြတော့လည်း သိရတာပေါ့ .. အားထုတ်မှုလေးကို ကျေးဇူးအထူးပါနော်..
ငယ်ငယ်က ခရစ်စမတ်ဆို carol singing လိုက်ဆိုကြတာ သတိရတယ် နှင်းတွေဆို တစ်ခေါင်းလုံးရွှဲလို့.. တစ်ချို့အိမ်တွေက သစ်လုံးတွေနဲ့ မီးဖိုပေးထားရင် ပြေးပြီး နေရာယူရတာအမော... ဆန်ပြုတ်တိုက်ရင် ဆန်ပြုတ် .. ကော်ဖီတိုက်ရင်ကော်ဖီ သောက်ကြတယ်လေ.. ဖြိုးရေးတာဖတ်ပြီး သတိရသွားပြိ.. လွမ်းလိုက်တာနော်...
Having roasted turkey is on thanksgiving.Whatever ur religion ,sharing goodthings n tradition is nice for everyone.Merry x'mas n happy new year in advance:)Gyidaw
နံပါတ်၁၀ အီတလီလို ငါး..၇မျိုးတော့ စားချင်တယ်..။
ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်ပေမယ့် အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိလို့ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ကျနော်လည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ အစွန်းမရောက်လို့လည်း သဘောကျပါတယ်။
ဗဟုသုတအနေနဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို ဖတ်သွားပါတယ်။